TOP 5 YAKATYA MITAMBO - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Posted on November 23, 2019 munyori Andrew	Comments Off pane TOP 5 SCARY GAMES
*yambiro* Iwe wapinda muNetEnt Casino inotyisa-zone, iine nzvimbo dzakasarudzika nemhepo dzakasarudzika, mavara emuzongoza-anotyisa uye nevhudzi-rinosimudza mubhadharo (aya achiri macasino mitambo mushure mezvose!)
Kupfeka zvipfeko zvevakuru, kana iwe uine zvishoma kutya-isu, zvinogamuchirika munharaunda pano, saka dhonza mapepa aya uye ngatitangei kutanga…
1) Iyo Wolf's Bane
Pablo Escobar, kurudziro yeNarcos, nenzira yakaipa akapa vakwikwidzi sarudzo mbiri - sirivheri kana lead.
Chibvumirano chiri mu 'Iyo Wolf's Bane' zvakanyanya kutadza - sirivheri kana kufa. Kana iwe usina chero sirivha mabara, iwe uri kudya kwemanheru uye inotyisa werewolf werewolf.
ichi 5 reel, 3 mutsara uye 10 Payline vhidhiyo slot ine zvakawanda zvinonakidza maficha ayo anoita kuti urambe uchitamba, zvisinei kuti wakasununguka sei iwe uri nerwiyo rwemukati.
Icho chiri kutaura chokwadi chimwe chinhu nekuti iyo creepy sepadenga yekumusoro inonzwika inobatsira kuita iyi mutambo chinhu chakakosha, saka kukwazisa kune yeNetEnt ruzha dhizaini timu!
Tarisa uone kurira kwekunze iwe nekukona kutamba pasi apa:
Pfuti Bet Casino
Kupisa Forex Casino
Mashawi Anokunda Casino
Imba Bet Casino
Vanhu vazhinji vachashandisa Halloween kushaiwa makumbo - pamwe nekuyedza zvimwe zvimisikidzo zveHalloween zveSpyok - - asi netariro, havazovi vasina musoro, senyeredzi yeNetEnt's Halloween Jack.
Kana iwe uchida kufungidzira, gehena hound uye yakasvibiswa dzungu misoro - mutambo uyu wakagadzirirwa iwe. Iyo yakavakirwa pachinyorwa chinotyisa pamusoro peMutungamiriri Asingatasvi Mabhiza, mweya wakasvibirira uchitsvaga noggin yake.
Kune iyo isinganyanye kufarirwa pakati pedu vanongoda yakanaka slot mutambo, ino zvakare yakanaka yekutora nechikonzero ichocho.
Halloween Jack ndi 5 reel, 3 mutsara slot ine 20 yakatarwa miripo uye ine zvinoverengeka zvinonakidza maitiro akadai Kufamba Wilds, Mahara Spins uye inokosha "Jack 'o' Chikamu”Maitiro.
Chii chakakosha nezveiyi modhi? Zvakanaka, iwe unobatwa nekuunganidza zviratidzo zvemwenje pane slot reel, iyo inokupa iwe mubayiro ne1 ye3 inonakidza Chikara chiratidzo chinoshamisa:
3 mwenje = Wakakandwa Hgehena Hound Wild
6 mwenje = wakakomerwa Jack 'o' Mwenje weChisango
9 mwenje = Kuwedzera Kunoita Rufu Revhiri
3) Ropa Suckers 1 uye 2
Kana iwe uine nyota yechimwe chinhu chitsvuku, chinodziya uye chisinganzwisisike-chinonhuwa, saka isu tatova nemitambo miviri yako.
NetEnt's Bloodsuckers akateedzana ndeimwe yayo inonyanya kuzivikanwa uye inobhadhara rukudzo kune vese zvinoyevedza uye yakaipa yakachena ye vampire mhando.
Yekutanga Ropa Suckers yakava kubudirira nekukurumidza uye ikave imwe yemitambo yakakosha yemitambo yemitambo yekutamba yakatenderedza nguva ino yegore - ndine chokwadi kuti unogona kufungidzira kuti nei!
ichi 5 reel, 3 mutsara uye 25 mutsetse wekubhadhara mutambo une akawanda maficha kusanganisira akakosha 'Vampire Hunt 'bhonasi mutambo.
Pakati peichi chimiro, iwe unosangana nemabhokisi kubva paguva rekare rekuviga. Chinangwa chako ndechokuvhura mabhokisi kuti abudise pachena vampire yekurara.
Kune yega vampire iwe yaunowana iwe uchagamuchira mari. Kana iwe ukawana bat imwe panzvimbo, iyo bhonasi mutambo uchauya kumagumo.
Ropa Suckers 2
Matombo akatukwa, zvakaoma kwazvo kugadzira 2nd kana 3rd mitambo inozivikanwa seyokutanga.
Zvakanaka, iyo masampires muRopa Suckers 2 inogona kutukwa (nenyota yeropa), asi mutambo wacho pachawo hauna kutukwa!
Na yakakwirira yekudzokera-kune-mutambi chiyero che98%, yakagadziridzwa mifananidzo uye zvimwe zvinhu - Ropa Suckers 2 yakaenzana, kana isina kudarika mukurumbira wewakambotangira.
4) Ghost Mahara
Mumwe-Eyed Ed, Peggy Akaora, Polly uye Mad Monkey "chikamu chechikepe uye chikamu chevashandi" kutambudza ma reels eNetEnt's Ghost Pirates.
Yakaburitswa mu2013, iyi slot yakanyatso kutora pesvedzero ne blockbuster Pirates yeCaribbean nhepfenyuro, asi yakapa pfungwa iyi kunonakidza uye kwakabikwa katuni.
Inosimuka nanhasi here? Kubva pane inoonekwa, ndeyechokwadi yakura zvakanaka - inotaridzika seyakajeka, inonakidza uye inonakidza sezvayakaita 6 makore apfuura.
Pane kushomeka kunooneka kwezvinhu zvakasarudzika, chiratidzo cheimwe mitambo yemazuva ano yeNetEnt, saka mutambo uyu unotanga kunzwa kunge wakaita kunge mabhisiketi echikepe mushure menguva pfupi.
5) Ozzy Osborne
Zvakanaka, tiri kubiridzira pano zvishoma. NetEnt's Ozzy Osborne slot haina kunyatso kutanga kusvika 21st November 2019, asi isu taifanira kuchawedzera icho pane ichi chinyorwa nekuti tinonyatsofarira icho.
Zvisinei, Ozzy akacheka musoro wechipi nekuda kwaSatani - kana asiri wepazita reHallic rekunakirwa, ndiani anoita?
NetEnt iri kukudza muchinda werima nemutambo wakasarudzika une akawanda maficha ayo anochengeta iwe uri mukati merwendo rwechitima kwemaawa.
Kutsvaga Halloween Mabhonasi?
PaNetEnt Casino, Halloween chinhu chinotyisa chinhu chikuru kwatiri. Isu freakin tinochida.
Ndosaka isu takanetsa yedu dhizaini dhizaini kuti vagadzire akawanda asinganzwisisike uye anoshamisa Halloween Graphics uye tikatogadzira rakaparadzana peji rakatsaurwa kukasino Halloween Mabhonasi.
Kunyangwe iwe uchigara mukati uye uchiona mamwe mafirimu anotyisa kana kupfeka zvipfeko zvekutyisa vavakidzani iyi Halloween, isu tinovimba mune yakanaka!
Casino bonus inopa:
30 kusunungura hapana dhipoziti Casino bhonasi pa Spectra Casino
155 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Pokies Casino
135 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa BetSpin Casino
105 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Nordicbet Casino
135 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso pa Insta Casino
175 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa BetChan Casino
125 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa BlingCity Casino
120 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Energy Casino
135 hapana dhipoziti bhonasi pa Noir Casino
145 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa Kultakaivos Casino
80 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa VegasSpins Casino
35 hapana dhipoziti bhonasi pa Triobet Casino
165 kusunungura hapana dhipoziti bhonasi pa MoonBingo Casino
155 kusunungura hapana dhipoziti bhonasi pa Winzino Casino
100 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa MondoFortuna Casino
155 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa LeijonaKasino Casino
150 kusunungura hapana dhipoziti Casino bhonasi pa norja Automaten Casino
135 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso pa Svea Casino
135 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa ReelIssland Casino
130 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Anna Casino
175 hapana dhipoziti bhonasi pa kumhara Page Casino
75 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Boss Casino
165 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Mamamia Casino
125 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Argo Casino
115 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa BGO Casino
0.1 1) Iyo Wolf's Bane
0.3 3) Ropa Suckers 1 uye 2
0.3.1 Ropa Suckers
0.3.2 Ropa Suckers 2
0.4 4) Ghost Mahara
0.5 5) Ozzy Osborne
0.6 Kutsvaga Halloween Mabhonasi?
3 Casino bonus inopa: